MSI GP ၊ GL နဲ့ GF Gaming Laptop တွေကို ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ
10th Gen MSI Gaming Laptop တွေကို ဘယ်လို ရွေးချယ်ဝယ်ယူကြမလဲ?
CES 2020 ပွဲမှာတုန်းက မျိုးဆက်သစ် Gaming Laptop တွေနဲ့အတူ နှစ်လိုဖွယ် Hardware ပိုင်းဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်တင်မှုတွေနဲ့အတူ စျေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း သက်သာတဲ့ မော်ဒယ်တွေ MSI ကြေညာပေးခဲ့ပါတယ်။
မော်ဒယ် List နဲ့ အသေးစိတ်ကို ဒီ Link မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်..
သိတဲ့အတိုင်း ကြားကာလတွေမှာ ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့ပွားမှု ဖြစ်နေလို့ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ရသလို ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကို ဧပြီလကုန်မှ ရောက်ရှိလာခဲ့တာပါ။
စာဖတ်သူတွေ ရင်းနှီးပြီးသား MSI Gaming Series ထဲမှာ GT ၊ GS ၊ GE ၊ GP နဲ့ GL/GF ဆိုပြီး မော်ဒယ် ၅ မျိုး ရှိထားသလို ဒီတခါ ဖော်ပြချင်တဲ့ ဆောင်းပါးက မတူညီတဲ့ Laptop ကို ဘယ်လို ရွေးချယ်နိုင်မလဲ?
စျေးနှုန်းထက် သုံးစွဲသူတွေ ရွေးချယ်ရ လွယ်ကူအောင် ဖော်ပြထားတာဖြစ်လို့ တန်ဖိုးမေးမြန်းခြင်း သည်းခံပါ
Laptop buying Guide for 10th Gen MSI Series
Intel နဲ့ Nvidia တို့က Generation Refresh လုပ်ထားတာဆိုတော့ 10th Gen Processor ၊ RTX 20-Series သို့ GTX 16-Series တွေကို တတ်နိုင်တဲ့ ငွေအင်အားအလိုက် စဥ်းစားနိုင်မယ့် မော်ဒယ်တွေကို ဖော်ပြပေးလိုပါတယ်။
ပထမဆုံး GP Series ကနေ စလိုက်ကြတာပေါ့။
MSI အနေနဲ့ မော်ဒယ်နာမည် အမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ထားပေမယ့် Personally ပြောရရင် GP စီးရီးကို ပိုသဘောကျမိပါတယ်။ ပထမအချက်က သက်သာတဲ့ စျေးနှုန်းဖြစ်ပြီး GE ၊ GS တို့နဲ့ ယှဥ်ရင် ရွေးချယ်စရာဖြစ်နေတယ် သို့ပေမယ့် GF/GL တို့ထက်တော့ ပေးရတဲ့ တန်ဖိုး များပါတယ်။
ဒီလို အလယ်ထဲ ရောက်နေတော့ GP တစ်လုံးရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ဟာ သာမန်ဂိမ်းကစားဖို့ကနေ eSports နဲ့ AAA Title တွေအထိ ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။
10th Gen Processor သုံးထားတဲ့ GP65/75 Line-up မှာ RTX 2060 GPU တစ်မျိုးထဲနဲ့ ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်
GP or Multi-purpose Gaming Laptop
ဒီတော့ Gaming Performance အတွက် လုံလောက်မှု ရှိပြီးသားလို့ ပြောနိုင်သလို တွဲဖက်ထားတဲ့ LCD Panel ကလည်း 144Hz Refresh Rate နဲ့ Smooth Experience ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ ကစားတဲ့ဂိမ်းပေါ် မူတည်ပြီး eSports ကစားဖြစ်တဲ့ Competitive Gamer တွေ ငွေအများကြီး မဖြုန်းချင်ရင် စဥ်းစားနိုင်တဲ့ မော်ဒယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် Colour Accurate Panel သုံးထားတဲ့အတွက် ဂိမ်းမကစားဘူးဆိုရင်တောင် Content Creation အတွက် GP စီးရီးကို စဥ်းစားနိုင်ပါတယ်။
Models GP65/GP75 10SEK
Display 15.6″/17.3″ Full HD
Panel Type IPS-Level with 144Hz (100%sRGB Support)
Processor Core i7-10750H
CPU Speed 2.6GHz ~ 5GHz (12MB Cache)
Memory Speed DDR4 2667MHz
GPU VRAM/Speed 6GB GDDR6 (Max-P)
Storage 256GB SSD + 1TB HDD (Combo)
Battery6Cell, 51 Whr
Keyboard Steelseries Perkey
Reasonable Performance for its Tier
နောက် အားသာချက်တစ်ခုက GP စီးရီးမှာ Per-key RGB နဲ့ ရနိုင်တာပါ။ GF/GL တွေမှအပ တခြားသော အမှတ်တံဆိပ် Gaming Laptop တွေမှာ လွယ်လွယ်မရနိုင်တဲ့ Feature တစ်ခုလို့ ပြောနိုင်သလို Disco Effect လို မျက်စိပသာဒ ဖြစ်ပြီး အရောင်ကာလ မျိုးစုံ သုံးချင်သူအတွက် ကွက်တိပါပဲ။
Steelseries Keyboard ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဘယ်လိုပြောမလဲ Gaming Gear ပိုင်း ပြည့်စုံမှု ရှိတယ်၊ နောက်ပြီးတော့ GE/GS တွေလို ဟိတ်ဟန်ရှိနေတဲ့အတွက် ငွေချင့်ချိန်လိုသူတွေ မဖြစ်မနေ စဥ်းစားရမယ့် မော်ဒယ်လို့ ပြောရမှာပါ။
ဒါထက် သုံးစွဲသူတွေ သတိထားမယ့်အချက်က MSI Gaming Laptop တွေမှာ ရှာမရတဲ့ ငွေရောင် ကိုယ်ထည်ဒီဇိုင်းကို GP Series မှာပဲ မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး ပုံပါအတိုင်း အတွင်းပိုင်းကိုယ်ထည်တစ်ခုထဲကိုပါ ငွေရောင်ကာလာနဲ့ လုပ်ထားတာပါ။
GL for eSport Gamers
ဒုတိယ ဦးစားပေးအနေနဲ့ ဖော်ပြလိုတာက GL Series ပါ။ GP နဲ့ သိပ်မကွာဘူးဆိုပေမယ့် GE Series အမွေဆက်ခံထားတဲ့ P တွေလောက်တော့ မစွာပါဘူး။ အထူးသဖြင့် Thermal နဲ့ Build Quality ပိုင်း စကားပြောသလို GL ကို စဥ်းစားသင့်တဲ့ အချက်က eSport Class အတွက်ပါ။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ 10th Gen Processor ရွေးချယ်နိုင်တဲ့အပြင် Graphics အပိုင်းမှာ GTX 1660 Ti အထိ Support လုပ်ထားလို့ပါ။
16-Series ဖြစ်ပေမယ့် RTX 2060 နဲ့ ယှဥ်လိုက်ရင် 5% ~ 10% လောက်ပဲ ကွာြခားမှုရှိတဲ့အတွက် ဒေါ်လာ ၂၀၀ ~ ၃၀၀ လောက် ချွေတာနိုင်သလို စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းမှာလည်း အားရစရာ Level တစ်ခုထိ ရနိုင်မှာပါ။
Hype with GTX 16-Series Graphics
ဒုတိယတစ်ချက်က CS:GO ၊ DOTA2 နဲ့ တခြား eSport ဂိမ်းတွေကို 144fps နှုန်းနဲ့ Game Setting အလိုက် တင်ကစားနိုင်တဲ့အချက်ပါ။ ငွေချွေတာချင်သူတွေ GP မစဥ်းစားလည်း GL နဲ့တင် အလုပ်ဖြစ်မှာပါ။
GTX 1660 Ti ဟာ AAA ဂိမ်းတွေကို High Setting နဲ့ တင်ကစားခွင့်ပေးသလို အကယ်၍ High သို့ Ultra နဲ့ ကစားနေရင်တောင် 45 ~ 60fps ထိန်းပေးထားနိုင်ပါတယ်။
Models GL65 10SDR
Panel Type IPS-Level with 120Hz
Graphics GTX 1660 Ti
Keyboard Single Red Backlight
ဒီလို ဂိမ်းမင်းပိုင်း အတွက် ပြည့်စုံသလောက်ရှိပြီး ငွေကြေးအသင့်တင့် သုံးစွဲနိုင်သူတွေ ၊ GP လို ဓနအင်အား မပိုလွန်း (အများပြား) မသုံးစွဲလိုသူတွေ GL စီးရီးကို အားပေးနိုင်ပါတယ်။
GF are Tight Budget Gaming Laptops
တတိယ ဦးစားပေး အနေနဲ့ တင်ပြလိုတာက GF စီးရီးပါ။ 10th Gen Processor သုံးထားတာချင်း အတူတူ GF75 နဲ့ GF63 နှစ်မျိုး ရှိနေတဲ့အတွက် 63 ကို Pure Budget အနေနဲ့ စဥ်းစားနိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့ ပိုပိုလိုလို သုံးစွဲချင်တယ်ဆိုရင် 65 တက်နိုင်ပြီး Laptop နှစ်လုံး ကွာနေတဲ့ Keypoint က GTX 1650 Ti နဲ့ GTX 1650 Max-Q သုံးထားတဲ့ အချက်ပါ။
Models GF75 10SCSR
Display 17.3″ Full HD
Graphics GTX 1650Ti
GPU VRAM/Speed 4GB GDDR6 (Max-P)
Battery3Cell, 51 Whr
GF63 မှာ GTX 1650 Max-Q သုံးထားလင့်ကစား GDDR6 4GB VRAM ပါဝင်တာကြောင့် GPU စွမ်းအင် အနေထားနဲ့ သုံးသပ်ရရင် eSports ၊ MOBA နဲ့ DOTA2 လို ဂိမ်းမျိုးအတွက် အေးအေးလူးလူး ဖျော်ဖြေပေးနိုင်ပါတယ်။
CS:GO ၊ PUBG နဲ့ Fortnite လို Competitive ဂိမ်းမျိုးအတွက် Strong ဖြစ်တယ်ဆိုမယ့် fps ပိုင်းမှာ စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် GTX 1050 ၊ 1050 Ti လို GPU မျိုးကနေ Upgrade လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ သိသာတဲ့ Performance Increase မြင်ရမှာဖြစ်ပြီး Benchmark တွေအရ 20% ကနေ 35% အထိ မြန်ဆန်မှာပါ။
Models GF63 10SCXR
Panel Type IPS-Level with 60Hz
Graphics GTX 1650
GPU VRAM/Speed 4GB GDDR6 (Max-Q)
Storage 128GB SSD + 1TB HDD (Combo)
အကယ်လို့ 1650 Max-Q နဲ့ AAA ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင်တောင် 1080p မှာ Medium Setting နဲ့ 50fps အထက် ကစားနိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် Content Creation အတွက် Suitable GPU ဖြစ်နေတာကြောင့် MSI ရဲ့ Creator Laptop တချို့မှာ ထည့်သုံးပေးထားတယ်။
သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ ဂိမ်းကစားရင် Video Edit ကိုင်ချင်တယ်၊ Lite Rendering သုံးမယ်ဆိုရင် GF63 က သုံးပျော်ပါတယ်။ အပေါ်က GP/GL တို့ဆိုရင် ပိုပြီးတော့ Powerful ဖြစ်တဲ့အတွက် မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ငန်းတွင်စေမှာပါ။
Last but not least! GPU အကြောင်းပြောရင်း တဆက်ထဲ ဖော်ပြလိုတာက 17.3 Incher GF75 မှာ သုံးထားတဲ့ GTX 1650 Ti ပါ။ ဒီကောင်က 16-series Mobile Class မှာ နောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Entry ဖြစ်သလို စွမ်းဆောင်ရည်က ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ပြောရရင် GTX 1060 ထက် 5% လောက် ပိုမြန်ပါတယ်။
Equipped with Superior Features
Turing ကတ်တွေက DirectX 12 Optimized ဖြစ်တာကြောင့် တကယ်လို့ DX12 Tittle တွေကစားရင် 15% လောက် စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
အခု GF75 မှာ GTX 1650 Ti 4GB GDDR6 သုံးပေးထားတဲ့အတွက် eSports ဂိမ်းတွေကို Performance အပြည့် fps မြင့်မြင်နဲ့ ကစားဖို့ စဥ်းစားထားရင် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
GL နဲ့ယှဥ်ရင် စွမ်းဆောင်ရည် နည်းမယ်ဆိုမယ့် ဟိုကောင်က Upper Mid-range ဖြစ်နေတဲ့အပြင် စျေးလည်း ပိုများတဲ့အတွက် GF ကို ငွေအင်အားကြည့်ပြီး ဦးစားပေးသင့်ပါတယ်။ အကယ်လို့ ပိုဖြုန်းနိုင်တယ်ဆိုရင် နောက် Level တက်ပါ။
Image: Game Bolt
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ GF နှစ်မျိုးကို Graphics နဲ့ Processor စွမ်းဆောင်ရည်ကြည့်ပြီး Budget အဖြစ် စဥ်းစားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဂိမ်းလည်းကစားချင်တယ်၊ Performance ကလည်း ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ အနေထားနဲ့ ကိုက်တာဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် စဥ်းစားရမှာပါ။
Which isaSuitable Choice?
နောက်ပြီး GL/GF စီးရီးတွေကို Budget နွယ်ပြီး ထုတ်ထားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် GP စီးရီးတွေလိုတော့ Per-key RGB မပါဘဲ Single Backlight တစ်ခုထဲနဲ့ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။
အနှစ်ချုပ် အနေနဲ့ ပြန်ပြောလိုတာက GP ဟာ Mid-range တန်းမှာ GE တွေနဲ့ နင်လား၊ ငါလား ဖြစ်နေတဲ့ မော်ဒယ်တစ်မျိုးပါ။ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့လည်း Performance ကောင်းပြီး Materials နဲ့ Build Quality ပိုင်းလည်း စဥ်းစားရင် ရွေးချယ်ပါ။ ဒိအတွက် GP65 နဲ့ GP75 တို့ ရှိပါတယ်။
GL65 ကတော့ ရိုးရှင်းစွာနဲ့ပဲ Upper Budget Laptop မှာ Mid-rang Turing ကတ် သုံးထားတဲ့ Gaming Machine ပါ။ သုံးစွဲသူတွေ အနေနဲ့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ Budget သို့မဟုတ် တတ်နိုင်တယ်ဆိုရင် ရွေးချယ်နိုင်တဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပြီးတော့ RTX 2060 နဲ့ မကွာတဲ့ Gaming Performance ရမှာပါ။
GF75/63 နှစ်မျိုးကိုတော့ ငွေအင်အား အဓိကကြည့်ပြီး ဝယ်ယူရမယ့် မော်ဒယ်တွေပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဂိမ်းလည်းကစား အလုပ်လုပ်ဖို့တွက်လည်း သုံးရတာမျိုး ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် Laptop တစ်လုံးရဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကအစ ကိုယ့်အတွက် တန်ဖိုးရှိမှာပါ။
ဒိအတွက် GPU အားသာချက်နဲ့ မြင်သာအောင် ဖော်ပြထားပြီး 10th Gen Processor နဲ့ မိတ်ဆက်ထားတဲ့ MSI Gaming Laptop ဘယ်လို ဝယ်နိုင်မလဲ ဆောင်းပါးက အထောက်ကူဖြစ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
MSI GP ၊ GL ၊ GF Series Homepage
9th Position နဲ့ Rank အမြင့်ဆုံး Tech ကုမ္ပဏီအဖြစ် ဖော်ပြခံရတဲ့ Apple
Free Games တွေနဲ့ မဲဆွယ်အား ကောင်းနေတဲ့ Epic Games